Ufumana njani iScholarship eCanada yaBafundi baseKhaya naBafundi be-2022
Eli nqaku libonelela ngeenkcukacha zekhonkrithi malunga nendlela yokufumana izifundi eCanada zabafundi basekhaya nakwamanye amazwe kuwo onke amanqanaba okufunda. Ngokulandela esi sikhokelo uqinisekile ukuba uyakufunda konke okubandakanyekileyo ukukhusela izibonelelo zokufunda kunye nenxaso mali yokufunda eCanada.
ICanada liziko lemfundo egqwesileyo kwilizwe liphela nakwingingqi. Akathandabuzi ukuvula iingcango zakhe ebanzi ekwamkeleni abafundi abavela kuzo zonke iintlanga ukuba bajoyine iparadesi yemfundo ekumgangatho wehlabathi. Ilizwe liyabonwa kwihlabathi liphela njengenye yezona ndawo zibalaseleyo zokufunda kwihlabathi, ke uya kuba wenza ukhetho olufanelekileyo ngokucwangcisa ukufumana isidanga eCanada.
Ngaba kulula ukufumana isifundi eCanada?
Ndingasifumana njani isifundi esipheleleyo eCanada?
Izidingo zaseKhanada zeeScholarship zaBafundi baseKhaya
Izidingo zaseKhanada zeeScholarship zaBafundi baseKhaya abaDanga abasaDanga
Izidingo zaseCanada Scholarship zabafundi baseKhaya beMasters
Izidingo zaseCanada Scholarship zabafundi baseKhaya bePhD
Izidingo zaseCanada Scholarship zaBafundi beZizwe ngeZizwe
Izidingo zaseKhanada zeeScholarship zaBafundi beZidanga zamazwe aphesheya
Izidingo zaseCanada Scholarship zabaFundi beMasters baMazwe ngaMazwe
I-Scholarship yaseKhanada yaBafundi baseKhaya
I-Canada Graduate Scholarships (CGS)
I-Vanier Canada Iimviwo zeeSchoolship (I-Vanier CGS)
IiNzululwazi zeNdalo kunye nezoBunjineli zeBhaso lesiDanga
Ibhaso leL.Holmes yezifundo zasemva koGqirha
Ibhaso likaDick Martin Scholarship
I-Pierre Elliot Trudeau Foundation yoGqirha beeScholarship
I-Scholarship yaseKhanada yaBafundi beZizwe ngeZizwe
IYunivesithi yaseWinnipeg Scholarship kaMongameli kwiiNkokheli zeHlabathi
Inkqubo ye-Mastercard Foundation Scholars Programme
I-Lester B. Pearson International Scholarship
UKaren McKellin iNkokeli yeHlabathi yeBhaso laNgomso
I-Award ye-International Student Award
INkokeli yeHlabathi yeBhaso laNgomso kwiYunivesithi yaseYork
Ngaphandle kokubonelela ngemfundo esemagqabini, iCanada iye yaziwa ngokunikezelwa kwayo ngezifundo ezibonelelwa ngabafundi basekhaya nakwamanye amazwe kwizifundo ezahlukeneyo ze-vis, i-undergraduate, masters kunye ne-Ph.D.
Nangona kunjalo, izifundiswa ngamanye amaxesha zinokuza njengezo zixhaswa ngokupheleleyo okanye zixhaswa ngemali kuxhomekeke kumzimba, ukusekwa okanye umbutho obonelela ngezifundo. Nangona kunjalo, zonke ezi nkxaso mali zixhasa inkxaso-mali yemfundo yabafundi.
Gcina eli nqaku ukuze ufunde ngokuchanekileyo ukuba ungafumana njani imali yokufunda eCanada kunye neemfuno eziyimfuneko ezifunekayo ukuze ufumane ezi nkxaso-mali.
Inkqubo yokufaka isicelo sokufunda eCanada inokuba luxanduva kwaye isoyikeka yiyo loo nto siphande ixesha elide kwaye kunzima ukunciphisa umthwalo wakho ngokubeka eli nqaku ndawonye ukuze abafundi abanomdla abajolise ekufundeni eCanada ngokufunda bangafumana lonke ulwazi kufuneka zonke endaweni enye.
Lonke ulwazi onokulufuna njengesidanga sokuqala, iinkosi, i-PhD, umfundi wamazwe aphesheya okanye wasekhaya ngendlela yokufumana isifundi eCanada zonke zichaziwe inyathelo ngenyathelo kweli nqaku, ke hlala phantsi ufunde ngokugqibeleleyo.
Eminye imibuzo iza kukukhathaza xa kufikwa ekufumaneni izifundiswa eCanada ezinje ngendlela umntu anokufumana ngayo isifundiswa esipheleleyo eCanada kwaye kuluxanduva kangakanani ukuyifumana. Ndiza kunika iimpendulo ezichanekileyo kwimibuzo embalwa emva koko ndiqhubeke nomxholo ophambili.
Ewe, kulula kubafundi basekhaya kodwa kungenjalo kubafundi bamazwe aphesheya njengoko kungekho zifundo zininzi zigcinelwe abafundi bamanye amazwe xa kuthelekiswa naleyo yabafundi basekhaya.
Ukuqaphela, uninzi lwezifundo eCanada zivulelekile kuphela kubafundi abamkelweyo. Phantse yonke iyunivesithi yaseCanada ineenkqubo ezikhethekileyo zokufunda zabafundi bamanye amazwe, kodwa isivumelwano kukuba kufuneka bafumane ukwamkelwa eyunivesithi kuqala ukuze babalungele.
Ukufumana isifundi esipheleleyo eCanada kunokwenzeka kodwa ubukhulu becala kuxhomekeke kuwe kunye nokuzimisela kwakho ukuyifumana. Ndiyathetha, kufuneka ujonge ezi zinto, usebenze ngokukhangela okuninzi kwaye ufunde amanqaku afana neli.
Kukho into ekufuneka uyiqonde malunga nokuphumelela kwabafundi, isiqinisekiso asonelanga. Le yinyaniso nje ethembekileyo.
Baninzi abantu abaqeqeshiweyo phaya abangazukufumana mali ngenxa yokuba behleli ezindlwini zabo belinde izifundiswa ukuba zize kubabulisa ngelixa befanele ukuba bajonge amathuba afumanekayo.
Yomelela xa ukhangela izifundiswa, ungathandabuzi ukufaka isicelo ngalo lonke ithuba olifumanayo kwaye ungaze uyeke kuba ufake isicelo samathuba aliqela kwaye awukhethwanga kuyo nayiphi na.
Kuya kufuneka ube ungumfundi okrelekrele, onomsebenzi ophumeleleyo kwizifundo kwaye wenze igalelo elifanelekileyo kwimfundo, uphando okanye inkonzo enxulumene nokwakha iCV yakho, ngakumbi njengomfundi we-PhD ofuna izifundiswa.
Ukufundiswa kwezifundo ikakhulu kunikezelwa ngokusekwe kwezi zinto ke kubalulekile ukuba ufaneleke njengomfundi obalaseleyo kwizifundo, impumelelo, isimilo esihle kunye nokuthatha inxaxheba kwimicimbi engaphaya kwekharityhulam.
Zingangabonakali zininzi kodwa uninzi lwezifundo zinikezelwa ngokusekwe kwezi ziqinisekiso. Kwakhona, thetha nabanye abantu abafana nabahlobo, amalungu osapho, abantu basekuhlaleni, ootitshala / abahlohli, njl, malunga nokukhangela kwakho isifundi eCanada, lolunye uhlobo lophando. Usenokungazi, kodwa oku kuyasebenza ngomlingo!
Ukuba liziko lakho lokubamba elinikezela ngezifundo, nxibelelana nabo ukuze wazi iimfuno eziyimfuneko kunye nendlela yokwenza isicelo sobufundi, soloko usenza isicelo semfundo yakho kwangoko kwaye ufake isicelo ngaphezulu kwelinye lamathuba, faka isicelo kangangoko unako ukulungela; yandisa ithamsanqa lakho.
Kubafundi bamanye amazwe, yenza ipasipoti yakho yamanye amazwe / yesizwe ilungele kwaye usetyenziselwa ukuya kuyo. Zilungiselele zonke iimfuno zokufunda phesheya ukuze xa kufika ithuba, ayizukutyibilika kwiminwe yakho ngenxa yokungabikho kwamalungiselelo. Ungafumana zonke ezisisiseko funda phesheya iimfuno apha.
Apha ngezantsi kukho iimfuno zokuba umfundi wasekhaya waseCanada ofundileyo afune ukufaka isicelo sokufunda kwiYunivesithi yaseCanada;
Abafakizicelo kufuneka bebeye okanye babe kunyaka wabo wokugqibela kwisikolo samabanga aphakamileyo saseCanada kwaye benqwenela ukufunda eyunivesithi eyamkelweyo eCanada okanye kufuneka ukuba sele bamkelwe kwinkqubo yesidanga sokuqala kwiyunivesithi yaseCanada eyamkelweyo.
Umfaki-sicelo kufuneka abe nekhadi lesazisi elisemthethweni okanye naliphi na elinye igosa eliza kuchongwa.
Umfaki-sicelo kufuneka alungele ukufumana iinkcukacha zemfundo afuna ukuyifaka isicelo.
Faka isicelo kwangoko kwaye ugcwalise ifom yesicelo sakho sokufunda ngeenkcukacha ezichanekileyo kwaye ungenise ixesha elide ngaphambi komhla obekiweyo.
Ukukhutshelwa kwesicelo somenzi-sicelo kuya kufuneka ukuze ube nethuba lokufumana imfundo efanelekileyo esekwe kwimfundo enikezelwa ngokusekwe ekusebenzeni komfundi ngaphambili, njengoko ezo mfundo zingafuneki.
Zininzi izifundo zesidanga sokuqala abanokufaka izicelo abafundi basekhaya baseCanada kwaye baneemfuno ezahlukeneyo, landela iimfuno zomfundi ngamnye ngokuchanekileyo.
Unokufaka isicelo kwezinye ze izifundi ezinikezelwa ngurhulumente waseCanada kubafundi bamazwe ngamazwe nabasekhaya.
Apha ngezantsi kukho iimfuno ezinyanzelekileyo zomfundi wasekhaya wokufaka isicelo sokufunda eCanada;
Umfaki-sicelo kufuneka agqibe i-3 ukuya kwi-4-yonyaka okanye ngaphezulu inkqubo yesidanga sokuqala kwiyunivesithi eqinisekisiweyo eCanada okanye phesheya.
Ukufaka isicelo, abafaki-zicelo kufuneka benze isicelo sokusebenza ngokusisigxina okanye ngokungesosigxina (njengoko kuceliwe ngumzimba wokufunda) kwinkqubo yesidanga semasters kwiyunivesithi yaseCanada eyamkelweyo kwaye bafumene isibonelelo sokwamkelwa.
Ngenisa isicelo sobufundi kwangoko kwaye ulandele izikhokelo ngokuchanekileyo.
Uninzi lweenkqubo zokufunda zabafundi baseKhanada zinika abafundi isiseko semfundo (intsebenzo yezifundo, ukubandakanyeka kwimisebenzi eyongezelelweyo yekharityhulam kunye negalelo elifanelekileyo) okanye isiseko esisekwe kwiimfuno (ezinikezelwa kubafundi abaneengxaki zemali). Ngaphambi kokuba ufake isicelo sobufundi be-masters qiniseka ukuba uwela kolunye lwezi ndidi ngaphandle kokuba iimfuno zokufunda zichaza ngenye indlela.
Apha ngezantsi kukho amanye amaxwebhu anokufunwa njengenxalenye yesicelo senkqubo yokufunda;
Ileta yengcebiso; enokufunyanwa kubahlohli bangaphambili, ootitshala bezikolo eziphakamileyo okanye abaqeshi (ngokuzithandela)
Ukubhalwa kwezemfundo okanye idiploma ezivela kwimfundo yangaphambili (igraduate)
Ngqina ngemfuno yezemali (ubukhulu becala umboniso osemthethweni wengeniso yosapho yonyaka)
La maxwebhu adweliswe apha ngasentla anokufuneka okanye angafuneki, kuxhomekeke kumzimba wokufunda obandakanyekayo. Lonke ithuba lokufunda elipapashiweyo lihlala liza nazo zonke iikhrayitheriya zokufaneleka kwelo thuba, iimfuno zesicelo kunye nenkqubo.
Apha ngezantsi kukho iimfuno ekufuneka zilandelwe ngumfundi wasekhaya we-PhD ukufaka isicelo sokufunda eCanada;
Umviwa kufuneka afake isicelo kuqala kwaye abhalise kwinkqubo ye-PhD kwiyunivesithi yaseCanada eyamkelweyo.
Kuya kufuneka ukuba ugqibe isidanga kunye nenkqubo yesidanga sokuqala.
Umgqatswa kufuneka okungenani abe neminyaka emibini okanye nangaphezulu yamava okusebenza enobungqina.
Abafakizicelo ababonisa ukusebenza ngokugqwesileyo kwezifundo kunye negalelo kwicandelo labo lokufunda bathathwa ikakhulu.
Faka isicelo solunye uqeqesho lwangaphandle lwe-PhD kwaye ulandele izikhokelo kunye neemfuno ngokuchanekileyo.
La maxwebhu alandelayo anokufuneka okanye njengoko kuchaziwe ngumzimba wokufunda;
Qalisa kwakhona okanye i-CV
Ukubhalwa kwezifundo ezivela kwisikolo esidlulileyo
Kubalulekile ukuba abafundi baqhubeke nophando ukuze bazi ngakumbi ngamaxwebhu afunekayo kunye nezinye iimfuno njengoko iinkqubo zokufunda zahlukile kwaye zineemfuno ezahlukeneyo.
Apha ngezantsi kukho izifundiswa ze-PhD eCanada ekufuneka uzijongile
I-Trudeau Foundation i-PhD scholarships eCanada
Nali inqaku elinolwazi esibhale ngalo ngokuthe ngqo indlela yokuphumelela i-PhD scholarships eCanada.
Oku kulandelayo luluhlu lweemfuno zabafundi bamanye amazwe abafaka izicelo zokufunda eCanada;
Umfaki-sicelo kufuneka afake isicelo kwaye anikwe imvume yokwamkelwa okanye uya kufaka isicelo sokwamkelwa kwinkqubo yesidanga sokuqala kwiyunivesithi yaseKhanada okanye kwikholeji.
Qalisa isicelo sakho kwangoko kwaye uhlale nemihla emiselweyo.
Enye inkqubo yokufunda inokufuna ukuba abafaki zicelo bamazwe aphesheya bangenise isincoko okanye bacele ireferensi kootitshala bangaphambili, balungiselele bobabini xa kunokwenzeka.
Faka isicelo sobhaliso lwangaphandle lwaseCanada elungiselelwe abafundi bamanye amazwe kwaye bathobele izikhokelo kunye neemfuno.
Yiba neempendulo zakho zemfundo.
Ipasipoti okanye nayiphi na enye indlela yoqobo yokuchonga
Ikharityhulam vitae okanye Qalisa kwakhona
Amanqaku emvavanyo emiselweyo (IELTS / TOEFL)
Yiba nemvume yokufunda esebenzayo eya kukunceda eCanada kude kube sekupheleni kwezifundo zakho zaphesheya.
Ukufundiswa kwezifundo kungafundiswa ngokusebenza komenzi-sicelo, ukubandakanyeka kwangaphandle, ezinye izakhono zokuyila okanye iimfuno zezemali ke qiniseka ukuba uwela kwenye yezi ngaphambi kokufaka isicelo kodwa ezinye izifundiswa azisebenzisi nanye kwezi kodwa endaweni yoko ziyazenzela, ngenxa yoko, ukuqhubeka kophando ibalulekile.
Nika amaxwebhu afunekayo okufaka isicelo sokufunda apha kulapho unxibelelana khona neziko lokubamba okanye inkqubo yokufunda ukuze ufumane ezinye iinkcukacha.
Nazi ezinye ziyafumaneka kwizidanga zamazwe aphesheya eCanada ukujonga ngaphandle.
Oku kulandelayo ziimfuno zabafundi bamazwe aphesheya abafaka izicelo zokufunda eCanada;
Kuya kufuneka ukuba uyigqibe inkqubo yesidanga sokuqala kwiziko elaziwayo.
Umfaki-sicelo kufuneka abhalise, afake isicelo okanye kungekudala uza kufaka isicelo sokwamkelwa ngokusisigxina okanye kwinkqubo yesidanga esisemthethweni kwiziko lemfundo laseCanada.
Qalisa isicelo sokufunda kwangoko
Dibana nenkqubo yokuvavanywa kwenkqubo yokufunda enokuba yinkokheli, amandla ophando kunye nokugqwesa kwizifundo okanye ngenye indlela njengoko kuchaziwe yinkqubo.
Bamba imvume yokufunda yaseKhanada esemthethweni.
Unokufaka isicelo sokuba uninzi lwangaphandle I-masters ye-canada yokufunda kwaye ugcine imigaqo, iimfuno kunye nomhla obekiweyo.
La maxwebhu alandelayo kufuneka abe sezandleni zakho njengoko kunokufunwa;
Ipasipoti yomhlaba jikelele
Ukubhalwa kwezifundo ezivela kwisikolo esidlulileyo.
Nxibelelana neziko lenginginya okanye iqumrhu lokufunda ukuze ufunde okungakumbi ngamaxwebhu afunekayo kulo naliphi na ithuba elipapashiweyo lokufunda.
Nazi ezinye ziyafumaneka iiMasters zokufunda eCanada ukujonga ngaphandle.
Oku kulandelayo ziimfuno zabafundi bamanye amazwe be-PhD abafaka izicelo zokufunda eCanada;
Abafakizicelo kufuneka babe nemvume yokufunda esebenzayo
Sele samkelwe okanye sinomdla wokulandela ngokusisigxina okanye inkqubo yexeshana ye-PhD kwiyunivesithi eyaziwayo yaseKhanada okanye kwikholeji.
Umfaki-sicelo kufuneka abenophando olukhethekileyo olunokudityaniswa nerekhodi esemagqabini yezifundo okanye ahlangane neendlela zovavanyo ezimiselwe liqumrhu labafundi.
Faka isicelo sokufunda kwangaphandle kwaye udibane nomhla obekiweyo kunye nezinye iimfuno
Amava okusebenza kwaye unike ubungqina nabo
Ukubhalwa kwezemfundo okanye idiploma
Nazi ezinye ezifumanekayo zokufunda kwi-PhD eCanada ukujonga ngaphandle.
Apha ngezantsi ndidwelise inani lokufunda okufumanekayo eCanada kwabafundi basekhaya ecaleni kwezicelo zabo kunye nendlela yokuzifumana.
Abafundi basekhaya okanye abemi baseCanada banokufaka izicelo zokufunda ezinokuthi zize ngurhulumente waseCanada okanye ezinye iziseko zesisa zaseCanada.
Apha ngezantsi kukho ezinye zeenkqubo zokufunda ezigqwesileyo ezinokuthi abafundi baseKhanada abafundele isidanga sasekhaya, i-masters kunye ne-PhD banokufaka izicelo zokubandakanya iimfuno kunye neendlela zokufaneleka ezifanelekileyo zokufumana iinkqubo zokufunda.
Le yinkqubo yokufunda eyixabisekileyo yonyaka $17,000 unikezelwa kubafundi abaphumelele kwiimasters okanye kumanqanaba okufunda. ICanada Graduate Scholarship inikezelwa kubafundi abaphumeleleyo ababonisa imigangatho ephezulu yokuphumelela kwizifundo zesidanga sokuqala nakwizifundo zokuqala kunye nenqanaba eliphezulu lophando olunokubakho.
Inkqubo yeCGS ibonelelwa ngokudibeneyo ziiarhente ezintathu zaseCanada: i-CIHR, i-NSERC kunye ne-SSHRC exhasa ukuya kuthi ga kwi-3,000 yabafundi minyaka le kuwo onke amabakala okufunda ukuze abafundi abaphumeleleyo bakwazi ukugxila kwizifundo zabo zexesha elizeleyo.
Ukuze babe nokufaneleka, abafaki-zicelo kufuneka bayigqibe inkqubo yesidanga sokuqala ngokukhethekileyo ngembasa yeklasi yokuqala kwaye babhalise okanye, bafake isicelo, okanye baya kufaka isicelo sokwamkelwa ngokusisigxina kwinkqubo yokuthweswa isidanga kwinqanaba lenkosi okanye lobugqirha kwisifundo esivunyiweyo Iziko laseKhanada.
Kubonakala ngathi ayizizo zonke izikolo zaseCanada ezikulungeleyo ukufumana le mfundo, kuya kufuneka unxibelelane neziko lakho lokubamba malunga nenkqubo yeCGS ukwazi ukuba isikolo sibonelela ngezifundo, ukuba bayakwenza oko, bafunde ngeemfuno zangaphakathi kunye nenkqubo yokwenza isicelo yeziko lakho. unokufuna kwaye uhloniphe ixesha elimisiweyo langaphakathi ngokunjalo.
Le yeyona nkqubo idume kakhulu kwaye inesisa eCanada, ivulelekile ukufaka isicelo kubafundi basekhaya kwaye inceda amaziko aseCanada ekutsaleni abafundi abagqwesileyo abagqwesileyo ababonisa ukugqwesa kwizifundo, amandla ophando kunye nobunkokeli.
IVanier CGS ixabisa i $ 50,000 ngonyaka iminyaka emithathu ngexesha lezifundo zobugqirha kwaye abafaki zicelo bahlala betyunjwe liziko labo emva kokuba behambisile isicelo esibonisa umdla wabo kwiVanier CGS.
I-scholarship inikezelwa ngokusekelwe kwimimandla emithathu yophando;
Isayensi yendalo kunye / okanye uphando lobunjineli
Inzululwazi yezentlalo kunye nophando ngezoluntu.
Abafakizicelo kuya kufuneka bangene kolunye lwezi ndlela zophando zingasentla ukuze bafaneleke ukufumana isifundi.
Inkqubo ye-Banting Postdoctoral Fsocis inikezela ngenkxaso-mali kwabo bafaka izicelo ezilungileyo kakhulu zasemva kwexesha ukuze babe negalelo kuhlumo lwezoqoqosho, lwentlalo kunye nophando olusekwe kuphando. Ubudlelwane bunikezelwa minyaka le kubafundi be-70, abaxabisekileyo $70,000 ngonyaka kwaye ayinakuhlaziywa emva kweminyaka emibini.
Ukuze babe nokufanelekela, abafaki-zicelo kufuneka bazigqibile zonke iimfuno zesidanga se-PhD kwaye babe nokusebenza ngokugqwesa kwizifundo, izakhono zobunkokeli kunye namandla ophando. Kwakhona, kufuneka ufake isicelo sokwamkelwa okanye sele ebhalisile kwinkqubo ye-PhD kwiyunivesithi yaseCanada eyamkelweyo.
Ngaphambi kokuba uqale isicelo sokuBambisana emva kokuBambisana njengomfundi we-PhD, qhagamshelana neziko ofuna ukufaka isicelo sokwamkelwa kwaye uqinisekise ukuba unelungelo lokusingatha uMntu oBantayo.
IBhunga lezeNzululwazi yezeNdalo kunye nezoPhando kwiBhunga laseKhanada libonelela ngothotho lwamabhaso abafundi basekhaya abafundela isidanga ukubakhuthaza ukuba babhalise ngakumbi kwiinkqubo zesayensi kunye nezobunjineli. Kuphela ngabafundi besidanga sokuqala ababhalise kule ndawo ingentla yokufunda abafanelekileyo kweli bhaso lokufunda.
Kunye ukuya kwixabiso lemali $100,000 I-CDN ngonyaka enokuthi igubungele unyaka omnye okanye emibini yezifundo zophando zabamkeli, ibhaso linikezelwa kubagqatswa abanesakhono sokwenza uphando kwi-chemistry, kwi-physics, kwi-biology okanye kwimathematics njengoko zinxulumene neenkqubo zonyango kunye nezebhayoloji.
Ukuze afaneleke, umgqatswa kufuneka abe ngummi waseCanada okanye umfundi wasekhaya kwaye aphumelele eyunivesithi eyaziwayo yaseCanada kwaye abambe isidanga sobugqirha.
Le ngxowa-mali ixabisa i-30,000 yeedola kwaye inikezelwa rhoqo ngonyaka kubafundi basekhaya okanye abemi baseCanada ababhalise ngokusisigxina okanye ngokungesosigxina, kwizifundo ezinxulumene nempilo kunye nezokhuseleko kunye nenkqubo ekhokelela kwisatifikethi somsebenzi okanye sezempilo nezokhuseleko.
Ukufaka isicelo, abafaki-zicelo kufuneka babhale isincoko samagama se-1,000 - 1,200, ileta yokugubungela kwaye bazalise ifom yokwenza isicelo kwi-Intanethi. Uvavanyo lwenziwa ngokusekwe kwiphakheji yesicelo esisicelo, ileta kunye nesincoko.
Le ngxowa-mali inikezelwa qho ngonyaka kubafakizicelo abasele benikwe ukwamkelwa okanye kunyaka wokuqala, emibini, okanye emithathu kwinkqubo yexesha elizeleyo yobugqirha kwiyunivesithi yaseCanada eyaziwayo. Ukuze ufanelekele ukubhalwa kwemali, umsebenzi wobugqirha womenzi-sicelo kufuneka unxulumene nenye yezi zinto zilandelayo;
Amalungelo oluntu kunye nesidima
Canada kunye nehlabathi
Abantu kunye nendalo yabo
Ukudityaniswa koku kungasentla, abafaki-zicelo nabo bakhethwa ngokusekwe kwizifundo ezigqwesileyo, ukubandakanyeka koluntu, izakhono zobunkokeli kunye nezakhono zonxibelelwano. Nxibelelana neziko lakho lenginginya ukuze wazi ukuba kufanelekile na ukuba ufumane isifundiswa sobugqirha sePierre Elliot Trudeau, kwaye ukuba ufanelekile ukubaleka kuya kufuneka ufake isicelo ngenkqubo yokhetho lwangaphakathi lweyunivesithi usebenzisa isiseko sesango.
Ngasentla izifundiswa zabafundi basekhaya okanye abemi baseCanada abaneenkcukacha eziyimfuneko. Izifundo zesidanga sokuqala uninzi lwazo zinikezelwa ngaphakathi ziiyunivesithi ezisingathiweyo ngokubhekisele kulungelelwaniso, abafundi ngekhe bazi ukuba bayaphononongwa ukuze bafundele kodwa nangayiphi na imeko, soloko unxibelelana neziko lakho lokubamba ukuze ufunde ngalo naliphi na isifundi onokuthi ufake isicelo kwinqanaba lokuphumelela.
Abafundi bamanye amazwe nabo banokufumana izifundi eCanada, apha ngezantsi ziinkqubo zokufunda ezinokuthi zifakwe ngabafundi bamanye amazwe kuwo onke amanqanaba okufunda.
Le ngxowa-mali inikezelwa kwi-53 yamazwe aphesheya kunye nabafundi abaphumeleleyo abangena kuyo nayiphi na inkqubo yeYunivesithi okokuqala. Ukuze afanelekele ukubhalwa kwemali, umenzi-sicelo kufuneka abe ngumfundi wamanye amazwe ongena kunyaka wokuqala wayo nayiphi na inkqubo nakweliphi na inqanaba lokufunda kwaye kufuneka ubuncinci be-80% yokungena okanye umlinganiso olinganayo kwaye ubenezakhono zobunkokeli.
Ukugqithisa iikhrayitheriya ezingentla kunye nokungenisa ifom yesicelo sokufunda, igama elinamagama angama-250 ukuya kuma-500, ikharityhulam ye-vitae kunye nezalathiso ezibini ezibonisa imisebenzi yakho eyongezelelweyo yekharityhulam okanye yevolontiya kwiYunivesithi yaseWinnipeg ngaphambi komhla obekiweyo.
Le nkqubo ibonelela ngemali, intlalontle kunye nenkxaso kwezemfundo kubaphengululi ezibandakanya kodwa azikhawulelwanga kwimirhumo yokufunda, indawo yokuhlala, iincwadi kunye nezinye izixhobo zemfundo. Inkqubo yomfundi ivulelekile ukuba ifake isicelo kubafundi bamanye amazwe kwinqanaba lesidanga kunye nenqanaba lokufunda.
Ukulungela, abagqatswa besidanga sokuqala akufuneki babe ngaphezulu kweminyaka ye-29 kodwa banokuba ngaphantsi ngexesha lesicelo ngelixa inkosi, umgqatswa kufuneka angabi ngaphezulu kweminyaka eyi-35 kodwa angaphantsi ngexesha lokufaka isicelo.
Inkqubo ye-Mastercard yesiseko sabafundi iyaphunyezwa ngokusebenzisa iiyunivesithi ezingamaqabane kwihlabathi liphela nganye ineemfuno ezahlukeneyo zokufaneleka kunye nomhla obekiweyo, kodwa iiyunivesithi ezibonelela ngenkqubo yezifundo eCanada yiYunivesithi yaseMcGill kunye neDyunivesithi yaseBritish Columbia.
Le yeyona nkqubo idume kakhulu kwaye inesisa eCanada, ivulelekile ukufaka isicelo kubafundi bamanye amazwe kwaye inceda amaziko aseCanada ekutsaleni abafundi abagqwesileyo abagqwesileyo ababonisa ukugqwesa kwizifundo, amandla ophando kunye nobunkokeli kwihlabathi liphela.
Le ngxowa-mali isebenza kuphela kubafundi bamanye amazwe abanenjongo yokubhalisa kwinkqubo yesidanga sokuqala kwiDyunivesithi yaseToronto kwaye benze impumelelo ebonakalayo kwizifundo, babonisa ubuchule kunye nezakhono zobunkokeli.
Isifundi sinikezelwa qho ngonyaka kubafundi be-37 kwaye sigubungela iifizi zokufunda, indawo yokuhlala kude kube sekupheleni kwesidanga sokuqala, iincwadi kunye nemirhumo eyenzekileyo kwaye inokwenzeka kuphela kwiDyunivesithi yaseToronto.
Ukuze ufaneleke, kuya kufuneka ube uyingcinga yoqobo kunye noyilo ozinikeleyo esikolweni nasekuhlaleni, onomdla wokufunda kwaye kungoku nje kunyaka wokugqibela wesikolo samabanga aphakamileyo ojonge ukuqala eyunivesithi kunyaka olandelayo wokufunda.
Eli bhaso lisekwe kwimfuno kunye nokuqaqamba, okunikezelwa kubafundi bezidanga zokuqala kumgangatho ophakamileyo kwizifundo, izakhono zobunkokeli, ukubandakanyeka kwimicimbi yezemfundo eyongezelelweyo kunye nenkonzo yoluntu, kunye nempumelelo eyaziwayo kwezinye iindawo eziphambili.
Ibhaso liyavuselelwa iminyaka emithathu eyongezelelweyo okanye kude kube sekupheleni kokufundwa kwesidanga sokuqala ukuba uphumelele kwisikhundla esonelisayo kwizifundo zakho kwaye uqhubeke nokubonisa isidingo semali.
Ixabiso lebhaso lilingana neemfuno zakho zemali eziya kuthi zichongwe ngokushwankathela iifizi zezifundo, kunye neendleko zokuhlala kunye nokuthabatha igalelo lemali onokuthi ulwenze nosapho lwakho unyaka nonyaka.
Ukuze afanelekele ibhaso, umfaki sicelo kufuneka angene kwiYunivesithi yaseBritish Columbia (UBC) kwiziko eliziwayo kwaye afake isicelo seprogram yokuqala ye-grade-grade kuyo nayiphi na ingqeqesho eyunivesithi.
Eli bhaso lifanelekile kwaye lisekwe kwiimfuno, linikwa abafundi bezidanga zokuqala abaphuma kwiindawo ezihlwempuzekileyo okanye ezidlakazwe yimfazwe kodwa babonakalise ukugqwesa kwizifundo kwanaphantsi kweemeko ezinzima kwaye bafuna uncedo lwezezimali ukungena eyunivesithi.
Ibhaso liya kuhlawula iifizi zezifundo kunye neendleko zokuhlala kwaye ziya kuhlaziywa kude kube sekupheleni kwesifundo se-grade-grade ngaphandle kokuba uphumelele ukuma kwezemfundo okwanelisayo kwi-faculty yakho kwaye uqhubeke nokubonisa iimfuno zemali.
Ukuze babe nokufanelekela, abaviwa kufuneka bafake isicelo sokuqala isidanga sokuqala kulo naluphi na uqeqesho kwiYunivesithi yaseBritish Columbia, kufuneka baphumelele okanye basandula ukuphumelela (hayi ngaphezulu konyaka omnye) kwisikolo samabanga aphakamileyo esaziwayo.
Eli liwonga elisekwe kumgangatho ofanelekileyo onikezelwa kumfundi wamazwe aphesheya onesidanga kunye nerekhodi esemagqabini yezifundo kunye nokungena kunyaka wabo wokuqala kwinkqubo yesidanga sokuqala kwiYunivesithi yaseYork.
Isifundi kufanelekile $17,000 ngonyaka kwaye iyavuseleleka iminyaka emithathu eyongezelelweyo ukuba umfundi ugcina i-7.80 kwinqanaba le-9 kwinqanaba le-York kunyaka ngamnye wokufunda eyunivesithi.
Ukuze ufaneleke, kuya kufuneka ube ungumfundi wamazwe aphesheya, ewe, unemvume yokufunda eCanada kwaye ufake isicelo okokuqala ngqa kwinkqubo yesidanga sokuqala eYork kwaye kuya kufuneka uqale isicelo sakho sokwamkelwa ngelixa usenza unyaka wokugqibela kwisikolo samabanga aphakamileyo okanye esiphakamileyo akukho ngaphezulu kweminyaka emibini emva kokuphumelela.
Abaviwa mabonyulwe kwisikolo sabo esiphakamileyo kwaye kufuneka babenezakhono zobunkokeli kwaye bathathe inxaxheba kwimisebenzi yeeyure zokufundisa.
Apho unoluhlu lwendlela yokufumana izifundi eCanada zabafundi bamanye amazwe, kunye neemfuno eziyimfuneko kunye neendlela zokufaneleka.
Ngenkxaso-mali yokufunda, ufumana imfundo oyifaneleyo kwaye wenze igalelo lakho elifanelekileyo ngaphandle kokukhathazeka ngemali oyifumanayo yokuthatha izifundo zakho nzulu kwaye ufezekise iinjongo zakho zemfundo.
Eli nqaku lendlela yokufumana izifundi eCanada zabafundi basekhaya nakwamanye amazwe zichaze zonke iinkcukacha ezibalulekileyo eziza kuluncedo xa ufuna isicelo sokufunda, ngoku ibhola isenkundleni yakho kwaye ucofa nje iqhosha ukuze wonwabe kwimfundo yokufunda eCanada.
Indlela yokufaka isicelo kunye nokuphumelela iVanier Canada Graduate Scholarship
Imigaqo yeVisa yaseCanada yoMfundi kunye neemfuno
I-13 exhaswa ngemali ngokupheleleyo nguRhulumente waseKhanada
Scholarships yaseCanada Isifundo kwamanye amazwe Isikhokelo Ukufunda kwelinye ilizwe kunye neScholarship
indlela yokufumana i-scholarships eCanada
Post Previous:Iimfuno zeYunivesithi yase York | Imirhumo, iScholarship, iiNkqubo, iZikhundla
Okulandelayo Post:132 Imibuzo ePhakamileyo yokubuza uMfundisi wakho kwiiNdawo ezahlukeneyo
Pingback: Izibonelelo ezi-5 eziMangalisayo kunye nezibonelelo ze-IELTS zaBafundi beZizwe ngeZizwe ngo-2022
Meyi 4, 2021 kwi-10: 07
Enkosi ngokwabelana ngolwazi olusebenzayo…
Yasamin Saifi uthi:
Epreli 22, 2021 kwi-3: 02 pm
Kuyonwabisa ukuba yinxalenye yefom yakho yoluntu eAfghanistan.